Zvemukati Zano: Monroe's Inokurudzirwa Sequence | Martech Zone
Zvemukati Zano: Monroe's Inokurudzirwa Sequence
China, Gumiguru 23, 2008 NeChishanu, Nyamavhuvhu 31, 2012 Douglas Karr
Mwanakomana wangu, bhiri, iri kutora kirasi yekutaura pa IUPUI uye akagovana neni maitiro akadzidziswa ekutaura kwekunyengetedza, akateedzana Monroe. Ndine chokwadi chekuti ndechimwe chedzidziso dzandakatora asi ndakazokanganwa sezvo ini ndanga ndisiri mukirasi kwenguva yakareba kwazvo.
Chaizvoizvo, Alan H. Monroe akaisa nhanho nhanho mukati mehurukuro yakapa mhedzisiro yepamusoro mukunyengetedza. Sezvo iwe uchiverenga kuburikidza nhanho uye nhevedzano, iwe unozotanga kunzwa kusagadzikana zvishoma sezvo iwe uchizoona idzi nzira dzinoshandiswa kubva kune zvese kubva pasarudzo yemutungamiri wenyika kusvika kuShamWow yekutengesa.
Attention - Tora kutariswa kwevateereri vako uchishandisa yakadzama nyaya, muenzaniso unovhundutsa, zvinoshamisa manhamba, makotesheni, nezvimwe.
Need - Ratidza kuti dambudziko rauri kutaura nezvaro riripo, kuti rakakosha, uye kuti harizoendi roga. Shandisa zviverengero, mienzaniso, nezvimwe. Ita kuti vateereri vako vazive kuti pane chikonzero chekutora matanho.
Kugutsikana - Unofanira kugadzirisa nyaya yacho. Ipa mhinduro dzakananga uye dzinoshanda dzinogona kuitwa nehurumende kana nharaunda kugadzirisa dambudziko iri.
Kuonekwa - Udza vateereri kuti chii chichaitika kana mhinduro ikaitwa kana ikasaitika. Iva nekuona uye kutsanangurwa.
Action - Udza vateereri danho ravangatora ivo pachavo kugadzirisa dambudziko iri.
Funga nezvekushandisa nzira iyi kana uchinyora yako blog zvinyorwa kana chero zvekushambadzira zvinhu zvakare! Sezvo yega blog blog iri peji yekumhara mukati uye pachezvayo, une mukana wekunyengetedza mushanyi wega wega kuti atore matanho. Tora kubva kuna Alan H. Monroe!
Monroe Inokurudzirwa Sequence yeShamWow:
Kutenda kumwanakomana wangu nezano repositi!
Tags: Marketingmonroemonroes inokurudzirwa kuteedzanakurudzirokutengwa
Gumiguru 24, 2008 na3: 41 PM
Ndinoziva ndambozvitaura kare, asi iye Bill chokwadi mumwe akangwara mukomana! 🙂